Tag: ụtọ asụsụ | Martech Zone
Tag: ụtọ asụsụ
Mkpa ezigbo ụtọ asụsụ na akara edemede na ịde blọgụ
Satọde, Febụwarị 6, 2010 Wednesday, April 30, 2014 Erik Deckers
Ndị ma m ma na m nwere ike ịbụ ntakịrị ụtọasụsụ na akara edemede. Ọ bụ ezie na agaghị m aga n'ihu na-agbazi ndị mmadụ n'ihu ọha (naanị m na-agwa ha okwu na nzuzo), amaara m ka m dezie akara ngosi nke nwere okwu na-ezighi ezi, ndị na-atụgharị uche na ndị na-adịghị mma. Yabụ, ekwesighi ịsị, m na-agbalị mgbe niile ijide n'aka na ederede m ga-abụ snuff grammatical. “Ọbụna na blọọgụ?” Ee, ọbụlagodi na blọọgụ. “Ma
50 Ederede Njehie Na-aga n'ihu Na-ezute Bloggers
Tọzdee, Ọktoba 1, 2009 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
E nwere oge ụfọdụ na ọrụ m na mgbe m na-aga mahadum na m jụrụ ikike ide m. Obi dị m ụtọ, ịde blọgụ wee (ọtụtụ) ndị na-agụ akwụkwọ belata ụkpụrụ ọgụgụ ha. Ndị na - agụ akwụkwọ nwere ekele na - enyocha mmejọ karịa ndị na - arụ ọrụ na - arụ ọrụ, nkesa nkewa, homonụ, ngwaa na - agbanwe agbanwe, prepositions, nnochi aha ndị edeturu, na mperi nsị. Ọ bụghị eziokwu n'oge gara aga, mana anyị niile bụ ndị edemede ọkachamara ugbu a. Ọ dịghị ụbọchị ndị ahịa ahụ ga-ede